Apple inotangisa yekutanga betas yeIOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5 | IPhone nhau
Apple yakashamisika masikati ano neshanduro nyowani yeIOS iyo isina kana kupfuura nepfuura beta chikamu IOs 11.2.1 yakasvika kugadzirisa zvinetso zveHomekit zvekuchengetedza, sekuvimbisa kwakaita Apple mazuva mashoma apfuura, uye nekudaro vhara episode nyowani mune akateedzana ekundikana kwesoftware zvinosuwisa kuti isu tiri kutambura kazhinji mumwedzi ichangopfuura.
Nepo vashandisi vakajairika vaigona kurodha pasi iyo yekugadzirisa kugadzirisa kukanganisa kwekuchengetedza, Apple yakasiya isu vedu vaive neBeta yakaiswa pasina chero gadziriso, izvo zvaishamisa. Mhinduro haina kunonoka kuuya, uye Maawa mashoma gare gare, pane imwe nguva isina kujairika, isu tatova neyekutanga beta yeshanduro nyowani ine yakasarudzika manhamba: 11.2.5.
Pamusoro peBeta yekutanga yeIOS 11.2.5, yakaburitsawo maBetas ekutanga ezvinyorwa zveApple Watch neApple TV: watchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5. Izvozvi tiri kuvandudza zvishandiso zvedu asi kubva pane izvo zvatakaona kuburikidza nehukama hwevashandisi veavo vashandisi vanga vachikurumidza kugadzirisa, Parizvino hapana chinoonekwa chitsva, kunze kwekunge ichizosanganisira mhinduro kudambudziko rekuchengetedza neKeanKit. Kana paine chimwe chinhu chakakosha kusimbisa, isu tinokuzivisa iwe nekukasira.
Shanduro nyowani yeiyo HomePod yakatangwa, mutauri weApple uyo usiri kana kutengeswa asi uyo watogamuchira zvigadziriso, uye izvo zvakatibatsira kuti tiwane zvinhu kwete chete nezve mutauri pachayo asiwo nezve zvimwe zvishandiso, senge iPhone X pachayo isati yaburitswa. HomePod vhezheni 11.2.5 yave kuwanikwa, kunyangwe chete Tim Cook nevamwe vashoma vanayo pamba panguva ino. Mukurukuri haazotengesi kusvika 2018, asingazive zuva chairo parizvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inoburitsa yekutanga betas yeIOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5
Flickr, inoratidzira mune yayo 2017 muunganidzwa kushandiswa kweiyo iPhone